Baaskiil ku wadida seerayaasha Qaranka: Tilmaamaha iyo Xeerarka ay tahay inaad ogaato - dieselboss
Baaskiil ku wadida seerayaasha Qaranka: Tilmaamaha iyo Xeerarka ay tahay inaad ogaato
Baaskiilyaal badan, waxaa dhib yar wax ka wanaagsan wadooyin dheer, wadooyin rogrogmi kara, taraafig yar oo leh gawaari gaabis ah, iyo muuqaalo dabiici ah oo cajiib ah. Iyo jardiinooyin badan oo Mareykan ah, tani waa xaalad.
Ka dib markii la xidhay si looga jawaabo faafitaanka coronavirus, inta badan jardiinooyinka qaranku waxay dib ugu fureen dadweynaha iyada oo la qaadayo tallaabooyin amni oo kala duwan. Iyo hal dariiqo oo dadka lagu dhiirigelinayo inay ku raaxaystaan ​​jardiinooyinka hadda waa baaskiilka.
Cynthia Hernandez, oo ah khabiir ku takhasustay arrimaha dadweynaha kana tirsan Xafiiska Arrimaha Dadweynaha ee Adeegga Beerta Qaranka ee Maraykanka, ayaa sheegtay in qaar ka mid ah jardiinooyinka qaranka, sida Yosemite ee California iyo Acadia ee Maine, ay aad caan ugu yihiin baaskiillada. Laakiin sidoo kale waxaa jira baaskiillo badan oo ka jira jardiinooyinka yar-yar ee la yaqaan: Hernandez waxay soo jeedinaysaa booqashada Beerta Qaranka ee Hot Springs ee Arkansas, beerta …
Entrada anteriorAnterior Hamburguesa de pollo australiana – Ecucuba
Entrada siguienteSiguiente ELIMINADO Requisitos del sistema – Requirementsfor1.com